IOS 13.6.1 dia misy izao hamaha ny loko maintso izay naseho ny lamba | Vaovao IPhone
IOS 13.6.1 dia misy izao hamaha ny loko maintso nasehoan'ilay efijery
Rehefa nino ny iOS 13.6 izahay dia io no fanavaozana farany horaisin'ny iOS 13, avy amin'ny mpizara Apple dia nisy fanavaozana vaovao natomboka omaly, a fanavaozana kely izay mamaha ny olana sasany nanjo ny mpampiasa sasany taorian'ny fametrahana ny iOS 13.6, fanavaozana izay nampiditra ny Car Keys sy ny vaovao audio ao amin'ny Apple News +.
Ity fanavaozana vaovao ity dia misy amin'ny fitaovana rehetra mifanaraka amin'ny iOS 13 ary mamaha ny olana hitan'ny mpampiasa sasany nahita ny fitaovany fa tsy namafa ireo rakitra tsy ilaina avy amin'ny rafitra. rehefa ambany ny toerana fitahirizana.
Ny olana iray hafa izay voavaha tamin'ny fanombohana ity fanavaozana vaovao ity dia hita tamin'ny fisehoan'ny terminal sasany a loko maitso noho ny olana fanaparitahana hafanana.
Ary farany, ilay bibikely farany voavaha tamin'ity vaovao ity (ary angamba ny fanavaozana farany ny iOS 13) dia hita ao amin'ny fampandrenesana fampahafantarana, fampandrenesana fa ho an'ny mpampiasa sasany dia tsy afa-miasa.
Na dia nilaza aza i Apple fa ny olana manga maintso naseho teo amin'ny efijery dia noho ny fiparitahan'ny hafanana, mpampiasa maro no milaza izany nipoitra io olana io rehefa tao anaty haizina tanteraka izy ireo ary raha tsy misy ny hafanana dia mety misy ifandraisany amin'ity olana ity.
Ao amin'ny beta fahefatra an'ny iOS 14 isika izao, beta iray izay avo kokoa noho ny beta voalohany ny fihinanana bateria, na dia tsy tokony ho toy izany aza. asehonay anao amin'ity lahatsoratra ity izay ampitahainay ny fihinanana bateria amin'ny beta farany farany amin'ny iOS 14, ny voalohany sy ny farany ny iOS 13.
Mampalahelo fa rehefa namoaka kinova vaovao i Apple, ny ny fihinanana bateria dia nitombo, olana mety hamboarina, na tokony hamboarina, rehefa avoaka ny kinova farany an'ny iOS 14, kinova farany tokony ho tonga amin'ny volana septambra, saingy mety hihemotra izany raha toa ka te hanao azy mifanaraka amin'ny fanombohan'ny iPhone 12 vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 13 » IOS 13.6.1 dia misy izao hamaha ny loko maintso nasehoan'ilay efijery
Apple Watch amin'ny volana septambra, iPhone 12 amin'ny volana oktobra.
Bateria iPhone mivonto Inona no ataoko?